Fantaro hoe iza avy ny sehatra matihanina no tokony handinihanao ny tenanao, arakaraka ny mari-pahaizana ara-pilazanao. - FIVAVAHANA TELY
Fantaro hoe aiza ny sehatry ny varotra no tokony handinihanao ny tenanao, arakaraka ny mari-pahaizana ara-pilazanao.
By bryanekobe On Jona 25, 2020
Momba ny fanandroana dia misy sekoly roa: ireo izay tsy mino an'izany mihitsy ary mihevitra fa mihoatra noho ny momba ny laharana sy ny toetrany ary, ireo izay mino azy! Na dia tsy tena resy lahatra ianao ary tsy ianao no karazana hizaha ny horoscope anao raha hahita fa hahita anao ny herinandro ny fatalanao, dia fantaro fa mihoatra lavitra noho izany ny fanandroana ary ho hitanay izahao izany aminao. Taorian'ny fikarohana be dia be, dia nanapa-kevitra ny sehatry ny asa izay ahafahanao mampifanaraka ny tenanao araka ny famantarana zodiakanao ianao. Mandehana fotsiny etsy ambany mba hahitana hoe iza no boaty azonao ampiasaina araka ny famantarana ny fanandroana anao!
Aries dia mariky ny afo nanjakain'ny planeta Mars izay planeta amin'ny hetsika sy ny herimpo! Ny Aries noho izany dia olona iray izay mavitrika, mahaleo tena ary mamorona. Izany no antony raha Aries ianao dia hahita anao miasa tsara amin'ny mozika na amin'ny hetsika.
Taurus dia somary hery mangina amin'ny famantarana ny zodiac. Tsara fanahy izy, mafana, mirona ary mikarakara. Izany no antony raha ianao Taurus dia tokony hialanao amin'ny sehatry ny lamaody, hatsaran-tarehy na ny tontolon'ny varotra… Mazoto miasa ianao ary tia ny matihanina amin'izany ianao dia mahazo valisoa ary marina ianao!
Tia fiaraha-monina i Gemini ary manana toetra misokatra. Liana sy mahira-tsaina izy ary tia mianatra zava-baovao. Izany no antony raha Gemini ianao dia manoro hevitra anao hampifanaraka ny tenanao amin'ny asan'ny fifandraisana sy ny asa fanaovan-gazety. Ny zavatra rehetra mitaky ny fampitana fampitana sy ny toetra mavitrika, ny fitantanana lohahevitra marobe amin'ny fotoana iray dia tsy hanakivy anao, raha tsy izany!
Amin'ny maha-kansera anao dia mahatsiaro tena sy be fihetseham-po ianao ary mihoatra noho ny tsy mivadika sy manafintohina rehetra. Izany no antony anontaniantsika ny hahatongavanao mpisolovava, mpampianatra na miara-miasa amin'ny ankizy satria misolo tena ny fanohanana ara-pihetseham-po ho an'ireo olona manodidina anao ianao.
Ny Liona dia fehezin'ny masoandro! Famantarana mampino sy mibahan-toerana izy io. Ka raha Liona ianao dia hahita anao miasa eo amin'ny sehatry ny fitsaboana, ara-politika na ny maritrano. Fa eo koa amin'ny fialamboly, fanaovana sary mihetsika ... Raha zohina, izay rehetra mety hanimba ny fahitanao.
Zavatra 8 lazaina mba hamporisika ny tenanao mandritra ny taona iray manontolo
Fambara 3 tsy nifidianana ny mety orientation
eto, accessories 10 no ilaina foana
Ny teratany ho an'ny virjiny dia olona malina sy sarotiny. Izy io dia mariky ny Tany izay manazava ny antony hikatsahan'i Virgos fitoniana eo amin'ny fiainany. Izany no antony anombohantsika azy ireo miasa amin'ny tontolon'ny haino aman-jery sy ny asa fitantanana na amin'ny sehatry ny literatiora. Raha Virgo ianao dia olona voalamina tsara ary mahay miasa. Toetra ilaina ho an'ity karazana matihanina ity!
Credit: tumblr, azafady.tumblr
Eo ambanin'ny famantarana ny hatsarana sy ny firindrana i Libra. Ireo izay eo ambanin'io famantarana io dia olona tsara fanahy ary izany no mamela azy ireo hanorina fifandraisana mirindra miaraka amin'ny hafa satria izy ireo matetika dia mitana ny asan'ny mpanelanelana. Tsy tia fifandanjana ny fifandanjana ary izany no mahatonga anay hahita azy ireo miasa amin'ny fahamarinana, ny fanelanelanana, ary ireo mpitaky fizahan-tany aza. Raha fintinina, ny matihanina izay handehanany "manampy" ny hafa!
Ny maingoka dia famantarana izay mitobaka amin'ny firehetam-po sy ny fihetseham-po. Tsy manakana azy tsy hahafantatra ny fomba hifehezana ny fihetseham-pony anefa izany. Olona tsy mivadika sy vonona hanolo-tena ary malala-tanana koa izy. Noho ny toetra tsarany rehetra dia afaka miasa amin'ny sehatry ny fitsaboana izy fa eo amin'ny asa matihanina izay tsy maintsy hitantana ny tsiambaratelo amin'ny maha-mpanelanelana azy na mpitsikilo miafina azy! Bah inona, tsy an-dry zareo fotsiny no misy ao anatin'ireo sarimihetsika.
Ireo teratany ao Sagittarius dia olona voatazona sy faly, nefa mahalala tsara ny fomba hihazonana ny fihetseham-pony izy ireo mifanohitra amin'ny filàny tena ilaina azy ireo tokony hanehoany ny tenany! Ary izay no mahatonga azy ireo ho lasa lavorary toy ny sosiôlôjia na, ka ny fifandraisana amin'ny fifandraisana an-gazety ohatra.
Amin'ny maha-Capricorn anao, ianao dia ambisy fatratra ambadika ary tonga lafatra indrindra! Manome ny tenanao hanatratra ny tanjonao ianao amin'ny fahamaotinana sy henjana. Ary marina, ny fitiavanao ny fifehezana dia hahatonga anao ho mpitantana tsara! Saingy mety ho lasa mpanao politika na injeniera ihany koa ianao.
I Aquarius dia nofehezin'ny planeta Uranus ary izay no mahatonga azy te hiova! Raha ianao dia Aquarius dia tsy maintsy lavinao ny namanao, hanao drafitra, manaitra ary manodihidy ary mihodina amin'ny fiainanao raha tsy izany dia leo ho faty ianao ... Izany no mahatonga ny asanao mety ho mpaka sary na talen'ny sary, zavatra hita maso!
Na dia Pisces no mariky ny tsindry kokoa amin'ny famantarana zodiak, dia tsy marefo araka izay fahitana azy. Amin’ny tanjaka lehibe misy olona dia hiaro nify sy hoho izay hinoany izy. Izany no antony, raha Pisces ianao, dia afaka mitodika any amin'ny matihanina amin'ny asa fitsaboana mba hanampiana ny hafa satria olona tena sarotiny ianao. Fa ho an'ny matihanina amin'ny zavakanto ihany koa, toy ny dihy sy ny mozika izay hanaovanao ny fiteninao!
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://trendy.letudiant.fr/le-job-etudiant-auquel-postuler-en-fonction-de-ton-signe-astro-a4800.html
Fantaro hoe iza avy ny sehatra matihanina no tokony handinihanao ny tenanao, arakaraka ny mari-pahaizana ara-pilazanao.
Te hamatotra ny kintana amerikana Reyna amin'ny fifanarahana maharitra ny BVB
voafetra ny teti-bola? Ireto misy toro-hevitra 3 mba hahitana tsara ny teti-bolanao
Ireto misy toro-hevitra mba hamonjy haingana ny lesonao